Shabbat ရှိ ထောက်လှမ်းရေးကင်မရာ - Rabbi Michael Avraham
အရှင်ဘုရား Michael Avraham
တုံ့ပြန်ချက် - အဓိက
တုံ့ပြန်ချက် - Halacha
တုံ့ပြန်ချက် - Meta Halacha
တုံ့ပြန်မှု - ယုံကြည်ခြင်း။
တုံ့ပြန်ချက် - Torah နှင့် သိပ္ပံ
တုံ့ပြန်ချက် - Talmudic လေ့လာမှု
တုံ့ပြန်ချက် - ဒဿနိကဗေဒ
Responsa - အကျင့်စာရိတ္တ
တုံ့ပြန်ချက် - အထွေထွေ
ဖိုရမ်မှ စာများ "ဒီမှာ တွေးမနေပါနဲ့"
Shiurim သည် Shas ၏ဝေစာတွင်ရေးထားသည်။
iGod ဗီဒီယိုများကို ကိုးကားပါ။
တုံ့ပြန်မှု > အမျိုးအစား- Halacha > စနေနေ့က စောင့်ကြည့်ကင်မရာ
0 အသံပေးပါ။ အသံကိုဖယ်ရှားပါ။
ရှူး လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်က မေးတယ်။
စနေနေ့တွင် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုကို လိုက်နာသော ကင်မရာရှေ့ သို့မဟုတ် ဓါတ်မီးဖွင့်ရန် စိတ်မဝင်စားဟု ယူဆကာ ဓာတ်မီးဖွင့်ရန် သို့မဟုတ် ကင်မရာဖွင့်ရန် စိတ်မဝင်စားဟု ယူဆကာ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့နေသော ဓာတ်မီးရှေ့တွင် ဖြတ်သွားခြင်းကို တားမြစ်ထားသည်ဟု သင်ထင်ပါသလား။
မီကင်း ဝန်ထမ်း လွန်ခဲ့သော6နှစ်ကဖြေဆိုခဲ့သည်။
ကျွန်တော် အသိဆုံးအနေနဲ့ ဒါကို တားမြစ်ထားတာ မရှိပါဘူး။ ပြီးတော့ တော်တော်များများက အဲဒါကို ကိုင်တွယ်ပြီးပြီ (ဥပမာ Shevet Halevi responsa နှင့် အခြားအရာများ)။ ဥပမာကို ဤနေရာတွင်ကြည့်ပါ-
၏ လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်က အကြောင်းပြန်ခဲ့သည်။
စနစ်ပိတ်ထားသည့်အခါ အချက်ပေးစနစ်၏ အသံဖမ်းကိရိယာကို ကျော်သွားပါကကော။
စနစ်ပိတ်ခြင်း = detector အလုပ်လုပ်ပြီး သတိပေးချက်များ ဖြစ်သော်လည်း စနစ်သည် အသင့်အနေအထားတွင် ရှိနေသောကြောင့် အချက်ပေးသံ မကြားရပါ။ detector သည် ကြိုးမဲ့ဖြစ်ပြီး input ဖြစ်နိုင်ခြေမရှိဘဲသာ ထုတ်လွှင့်နိုင်သောကြောင့် ၎င်းကို system မှတဆင့် ပိတ်၍မရသော်လည်း ဘက်ထရီကို ဖြုတ်လိုက်ရုံသာဖြစ်သည်။
မီချီ ဝန်ထမ်း	လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်က အကြောင်းပြန်ခဲ့သည်။
မေးခွန်းကို ထက်မြက်အောင် လုပ်ပါ။
ဆိုလိုသည်မှာ သင်ဖြတ်သန်းသည့်အခါတိုင်း detector သည် အလုပ်လုပ်ပြီး ထုတ်လွှင့်သော်လည်း အချက်ပေးစနစ်သည် transmitter ကို တုံ့ပြန်ခြင်းမရှိပါ။
၎င်းသည် ကျွန်ုပ်အိမ်တွင် တပ်ဆင်ထားသော detector ဖြစ်ပြီး စနေနေ့တိုင်း ထောက်လှမ်းကိရိယာများကို ဖုံးအုပ်ခြင်း/ဘက်ထရီကို ဖယ်ရှားခြင်းမပြုမီ သဘောတရားအရ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
တစ်ခုတည်းသော ခြားနားချက်မှာ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းရန် ရွေးချယ်ခွင့်ရှိသည်။ ဒီအခက်အခဲက လိုအပ်သလားလို့ မေးစရာရှိပါတယ်။
detector နှိုးသော်လည်း ဘာမှ မပို့ပါက စိုးရိမ်စရာ အကြောင်းမရှိပါ။ ကျွန်တော့်အမြင်အရတော့ ဒါကို တားမြစ်တာ မရှိပါဘူး။ အရေးယူခြင်းအတွက် တိုက်ရိုက်ရလဒ်များကို မတွေ့မြင်ရသောအခါ (Shabbat တွင် ဟိုတယ်တံခါးဖွင့်သော ကတ်တစ်ခုအတွက်) နှင့် ရလဒ်များ (တံခါးပွင့်လာသည့်အခါ) ဖြစ်သော်လည်း လွှဲပြောင်းခြင်း၏ အကျိုးဆက်များကို မမြင်ရကြောင်း အရှင်ဘုရား၊ ကတ် ဒါက ကျွန်တော်သဘောတူလို့ သေချာမသိတဲ့ အသစ်အဆန်းတစ်ခုပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီမှာ ရလဒ်တွေ လုံးဝမရှိဘူး (ဒါတွေကို မမြင်ရဘူး) ဆိုတော့ ပိုဆိုးနေစရာ မလိုဘူးလို့ ကျွန်တော် မမြင်ပါဘူး။
မိုရှေ လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်က အကြောင်းပြန်ခဲ့သည်။
အိမ်မှာမရှိတဲ့အချိန်တွေမှာသာ detector ကိုဖွင့်သင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ သိသိသာသာ မဟုတ်ဘူးလား?
login သို့မဟုတ် ကျေးဇူးပြု. Register သင့်ရဲ့အဖြေကိုတင်သွင်းဖို့
အသုံးပြုသူအမည် သို့မဟုတ် အီးမေးလ်လိပ်စာ
ဟောပြောပွဲများကို မှာယူရန် Dafna Avraham ကို ဖုန်း သို့မဟုတ် WhatsApp ဖြင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ယခင်သင်တန်းများ၏ မှတ်တမ်းများ (ဝေဖန်ပိုင်းခြားတွေးခေါ်မှု၊ Yeshiva ပညာသင်ဆု၊ ဒဿနတွေးခေါ်မှု၊ ခေတ်ပြိုင်နှင့် အထက်တန်းစားနှင့် ပေါင်းစပ်ဂျူးဘာသာ) တို့ကို Daphne ထံမှ 052-3322444 ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ပြီး သင်တန်းတစ်ခုလျှင် NIS 250 အတွက်လည်း ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
အမှားပြင်ဆင်မှုများစွာပါဝင်သည့် paperback trilogy ၏ ထုတ်ဝေမှုအသစ်ကို ယခုထွက်ရှိထားပြီးဖြစ်သော်လည်း ၎င်းတို့သည် အဓိကအားဖြင့် ပုံနှိပ်ပြင်ဆင်မှုများဖြစ်ပြီး ၎င်းတွင် သိသာထင်ရှားသောပြောင်းလဲမှုမရှိပါ။ ထို့အပြင် စာအုပ်အသစ်များ တင်ပို့ရောင်းချခဲ့သည်။
စာအုပ်များကို စာအုပ်တစ်အုပ်အတွက် 180 NIS သို့မဟုတ် 70 NIS အတွက် ပြီးပြည့်စုံသော trilogy အဖြစ် ရောင်းချသည်။ ၎င်းတို့ကို Lod တွင်ဖြစ်စေ ယေရုရှလင်မြို့၌ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် 42 NIS ကုန်ကျစရိတ်ဖြင့် အိမ်သို့ပို့ဆောင်ပေးနိုင်သည်။
ထို့အပြင် ပထမအကြိမ်ထုတ်ဝေမှုမှ "မည်သူမျှ ဝိညာဉ်တော်မအုပ်စိုးရ" အခြားစာအုပ်များစွာလည်း ရှိသေးသည်။ လျှော့စျေး (30 NIS) ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ နောက်ထပ် 150 NIS အသစ်နှစ်ခုပါသော trilogy တစ်ခု။
စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများနှင့် ဝယ်ယူမှုအတွက်- Daphne 052-3322444
အသစ်- trilogy စာအုပ်များ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ် မိတ္တူများ- ပထမဆုံးတွေ့တယ်။
ဝိညာဉ်တော်၌ အုပ်စိုးရှင်သည် လူမရှိ။
Zoom တွင် တိုက်ရိုက်သင်ခန်းစာများ
Zoom တွင် တိုက်ရိုက်သင်တန်းများကို အောက်ပါအချိန်များတွင် ကျင်းပပါသည်။
သောကြာ နှစ်ပတ်တစ်ကြိမ် 9:00-10:00
သင်ခန်းစာများအပြီးတွင် ပါဝင်သူများသည် ၎င်းတို့ဆန္ဒအတိုင်း (သင်ခန်းစာနှင့်မသက်ဆိုင်သည့်တိုင်) ဆွေးနွေးလိုသည့်မေးခွန်းများကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆွေးနွေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ သင်ခန်းစာအားလုံးကိုလည်း မှတ်တမ်းတင်ပြီး အပ်လုဒ်လုပ်ထားပါတယ်။ ရှာပါ။. အောက်ပါလင့်ခ်တွင် Zoom သင်ခန်းစာများကို သင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
အတန်းများနှင့် ၎င်းတို့၏ရက်စွဲများအကြောင်း အပ်ဒိတ်များဖြင့် WhatsApp အဖွဲ့သို့ ဝင်ရောက်ရန်၊ orenmarg@gmail.com သို့ အီးမေးလ်တစ်စောင် ပေးပို့ပါ။
" Torah အလင်းနှင့် လှပစွာ မချိတ်ဆက်မိသောအခါ ဘုရားသခင်ကို ကြောက်ရွံ့ခြင်း၏ ကြီးမားသောအားနည်းချက်မှာ အပြစ်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းအစား တွေးခေါ်မှုကို ကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့် အစားထိုးခြင်းဖြစ်ပြီး၊ လူသားသည် စတင်တွေးတောရန် ကြောက်ရွံ့လာသောကြောင့်၊ သူသည် လောက၌ နှစ်မြုပ်သွားခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ မောဟရွှံ့နွံသည် မိမိစိတ်၏အလင်းကို ယူဆောင်၍ စိတ်ဝိညာဉ်ကို ထူစေသည်” ( အရှင်ဘုရား၊ ရှစ်ဖိုင်၊ အေရာ့ဇ်)
"ထို့ကြောင့် သူ၏ထင်မြင်ယူဆချက်ကို ဆန့်ကျင်သော မည်သည့်အရာကိုမဆို၊ စူးစမ်းလေ့လာခြင်းနှင့် အသိပညာကို မြတ်နိုးခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ခြင်းသည် မသင့်လျော်ပေ။ ဤအတိုင်းဆိုသည်ကား- မင်းအလိုရှိသလောက်သာပြောပါ... သာသနာတွင်း ရန်ဘက်စကားများ ပျောက်ကွယ်သွားခြင်းကြောင့် (သို့) သာသနာ၏ အားနည်းခြင်း ပျက်ပြယ်သွားခြင်းသာမဟုတ်... စိတ်က တားဆီးခြင်း မရှိသောကြောင့်၊ အရာရာတိုင်း၌… ဤသူသည် အရာဝတ္ထုများ၏ အမှန်တရား၏ အကြောင်းအရာသို့ ရောက်ရှိလာပြီး ပရမတ်အမှန်တရားပေါ်တွင် ရပ်တည်ကာ ဤကဲ့သို့သော အရာများအတွက် သီးသန့်ခွဲထားခြင်းမရှိပေ။ မိမိသူရဲကောင်းကို ပြသလိုသူတိုင်းကို ဆန့်ကျင်လိုသော သူရဲကောင်းတိုင်းသည် မိမိအား ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုသူအား တတ်နိုင်သမျှ အောင်နိုင်စေလိုသော ဆန္ဒရှိပြီး၊ ထို့နောက် အနိုင်ယူရန် ကြွလာသော သူရဲကောင်းကို အနိုင်ယူမည်ဆိုလျှင်၊ အောင်နိုင်သူသည် သူရဲကောင်းအရှိဆုံးဖြစ်သည်။” (Beer Hagola၊ Beer Shiva၊ Prague မှ Maharal)။
စာဖတ်သူများအတွက် ရှင်းလင်းချက်နှင့် ယူဆချက်
ဆိုဒ်၏ Facebook စာမျက်နှာ
အီးမေးလ်ဖြင့် ပို့စ်အသစ်များကို လက်ခံပါ။
နောက်ထပ် စာရင်းသွင်းသူ 3,092 ဦးနှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။
သေးငယ်သောထိုင်ခုံ VS အထက်တန်းကျောင်းထိုင်ခုံ
သတ်သေဖို့လား။ အနည်းဆုံးတော့ Thos အရပေါ့။
Baal Shem Tov နှင့် ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ Breslav of Rabbi Nachman ၏ဝိညာဉ်
တုံ့ပြန်မှုများကို လိုက်လျှောက်လိုသူများအတွက် ပိုမိုအဆင်ပြေစေရန် ကိရိယာများအောက်ရှိ မှတ်ချက်မီးတိုင်အတွက် စာရင်းသွင်းရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။
ယနေ့ခေတ်တွင် ဤခံယူချက်သည် အများသူငှာဖြစ်သည်။ ဂရန် ကွယ်လွန်သူ ပရော်ဖက်ဆာ David Halvani Weiss ကွယ်လွန်ခြင်း (ကော်လံ ၄၈၅)၊
စားပွဲထိုး ဂရန် ကွယ်လွန်သူ ပရော်ဖက်ဆာ David Halvani Weiss ကွယ်လွန်ခြင်း (ကော်လံ ၄၈၅)၊
အဗ္ဗ၁ ဂရန် ကွယ်လွန်သူ ပရော်ဖက်ဆာ David Halvani Weiss ကွယ်လွန်ခြင်း (ကော်လံ ၄၈၅)၊
လက်။ ဂရန် လေ့လာမှုနှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်းအတွက် အဖြေ
ק ဂရန် လေ့လာမှုနှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်းအတွက် အဖြေ
မကြာသေးမီက မှတ်ချက်များ၏ တိုးချဲ့စာရင်းတစ်ခုအတွက်
ပို့စ်အပ်ဒိတ်များအတွက် Telegram ချန်နယ်
םויותיוצרים© 2022 အရှင်ဘုရား Michael Avraham | မှပံ့ပိုးသည် Astra WordPress အခင်းအကျင်း